Dugsi lagu barto haasaawaha oo uu muran ka dhashay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Dugsi lagu barto haasaawaha oo uu muran ka dhashay
October 21, 2019 at 14:47 Dugsi lagu barto haasaawaha oo uu muran ka dhashay2019-10-21T14:47:26+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Waxaan hortaaganahay hoteelka caanka ee Savoy oo ku yaalla bartamaha magaalada London, waxaana sugayaa koox dhalinyara ah oo dugsiga shukaansiga lagu barto soo siiyey lacag dhan $700 oo casharro lagu siiyo.
Eddie Hitchens ayaa wuxuu fuulay meel sare si uu ula hadlo dadka ku hareereysan isla-markaana casharro hordhac ah uu ka siiyo waxyaabaha halkan lagu barto.
“Hayeh, magaceygu waa Eddie. Waxaan tababarkan soo waday ilaa iyo 2011-kii.”
“Casharkan” wuxuu qofku si fudud ugu baranayaa sida ugu sahlan ee ay raggu dumarka gacanta ugu soo dhigi karaan.
Xilligan lagu jiro oo aaladaha lagu wada xiriiro ay dunida aad ugu hormartay waxaa casharrada shukaansiga lagu baahiyaa online-ka, taasoo ragga u suuragelinaysa iney si fudud oo degdeg ah dumarka u hantaan.
Muuqaallada ay You Tube ku baahiyaan ayaa waxay noqdeen kuwo maalin walba so jiita kumannaan daawadayaal ah.
Ragga doonaya iney muuqaallada bogga boot camps ku jira daawadaan, wuxuu leeyahay awaamiir ay raacaan ragga oo keli ah.
Dumarka ayaan kaalin weyn ku lahaynn casharradan iyada oo mararka qaar ay dumarka dhibaatooyin kala kulmaan ragga casharrada soo qaata ee waddooyinka kula hasaawa iyaga oo aysan dumarku raalli ka ahayn.
Casharrada sida loo bixiyo
Cadnaan hadda wuxuu ku jiraa xabsi iyada oo la filayo inuu muteysto xukun kaddib marki lagu soo eedeeyey inuu ku xadgudbay gabdho dhalinyara ah iyaga oo waddada maraya oo uu si khaldan ula dhaqmay.
Wuxuuna Cadnaan uu sameyn jiray qarsoodi inuu muuqaallo kaga duubo dumar badan isaga oo aan oggolaasho ka helin.
Nin dhalinyara ah oo ay jaamacadda saaxiib ku yihiin Cadnaan wuxuu sheegay Axmed inuu muuqaallo ka badan 250 oo ay ku jiraan qaar si qarsoodi ah loo duubay uu geliyey boggiisa You Tube, taasoo ka mid noqotay waxayaabaha lagu soo eeddeeyey.
Waxaan soo daba socday laba haween ah oo ku sii socda dhanka Axmed. Waa xilli mugdi ah oo lagu jiro bisha November wuxuu gabdhaha ku joojiyey waddada bartankeeda.
Beth waxay sheegtay hadalladii dhexmaray labadooda ineysan ahayn kuwo wanaagsan, balse ay ahaayeen khalad.
“Waxay igu reebtay saameyn,” ayey tiri. “Habeenki oo dhanna welwel iyo cabsi ayaan ku jiray.”
Axmed saaxiibkii ayaa si qarsoodi ah muuqaal uga duubay Axmed oo la hadlaya gabar 20 jir ah oo lagu magacaabo Emily, kana mid ah ardayda Glasgow.
Kaddibna Axmed muuqaalkii sida qarsoodiga loo duubay ayuu ku baahiyey YouTube.
Horay waxaan dumar badan uga maqli jiray in dumar badan waddooyinka xadgudubyo iyo meel ka dhacyo looga geysto, gaar ahaanna ay dumar badan la kulmaan.
“Haddii aan qofka na dalbada aan diidno ma aha in nala caayo. Haddii aanan raalli ka ahayn inaan qof xiriir la yeelannana sida oo kale.”
“Waxay ahayd mid niyadjab leh, oo xanuun badan, aad ayuu ii niyad jabiyay” ayey tiri Emily.
Emily iyo Beth oo keli ah ma aha dumarka xadgudubka loo geysto. Muuqaal ayaan u sameynayey BBC Scotland marka waxyaabaha aan baaritaanka Axmed ku sameeyey kala kulmay waxaa ka mid ah muuqaallada oo barasha bulsada iyo You Tube uu ku baahiyey ay maalmo gudahood malaayiin qof daawadeen.
Nicola Sturgeon oo ka mid ah wasiirrada Scotland isla-markaana ka mid ah baarlamaanka dalkaasi waxay sheegtay arrintan iney “argagax ku noqotay aadna waan ula yaabay” waxa aan warbixinta ku arkay ayey tiri.
Markii ugu horreysay oo aan bilaabayey baaritaanka Axmed la xiriira, maanan ogeyn inuu ku lug leeyahay arrimahan.
Waxaana baaritaankeyga ku ogaaday iney dad gaar ah online ka xushaan, kaddibna ay ku sii gudbiyaan You Tube channel ay leeyihiin.
Muuqaallada casharrada sida dumarka aad waddo kula kulanto si fudud loogu soo jiito, waxaa bogga You Tube ay ku leeyihiin ku taxan oo ka daawada dad ka badan 110,000 oo qof.
Dr Rachel oo wax ka dhigta dugsiga dhaqaalaha ee London, ayaa waxay muddo toban sana ah baraneysay sida qofka loo soo jiidan karo.
“Waxaa jira fikir oranaya casharrada soo jiidashada dumarka inuu ragga u sahlayo sida ay dumarka u soo jiidan karaa,” ayey tiri Dr O’Neill.
“Inta badan dugsiyada tababarrada bixiya waqtigooda ugu badan waxay ku bixiyaan waddooyinka, hoteellada, maqaayadaha iyo meelaha ay dadka ay isugu yimaaddaan, si ay ardayda farsamooyinka la soo baray ay ficil ahaan ugu muujiyaan.”
Iska hor imaadyada ka dhasha
Shan bilood kaddib ayaan ku noqday London, marka xilligaasi weriyeyaasha BBC waxay isku dayeen iney la kulmaan qaar ka mid ah macallimiinta oo ay su’aalo adag weydiiyaan.
Dhowr usbuuc markii ay diiddanaayeen iney ila kulmaan, waxaan helay Eddie Hitchens oo tababar siinayo koox dhalinyara ah. Waxaana su’aalay maxay dumarka ay ugu qasbayaan waxay raalli ka ahayn iney sameeyaan.
“Arrintaasi gebi ahaanba waa khalad,” ayuu yiri. “Waa khalad aad u weyn. Gebi ahaanna waxaad arrinta gaarsiisay meel aysan gaarsiisneyn…walaal. Arrinta waa xirfad u baahan in la meel mariyo.”
“Xaqiiqatan ragga ayaan caawinnaa… marka annagu waxaan ka shaqeyneynaa waxyaabaha sahlaya in laga hortago dhaqamada kufsiga iyo waxkasta oo sharci darra ah oo aan raallina laga ahayn.”
Richard Hood wuxuu diiday iney ragga baraan sida ay dumarka ugu cadaadin karaan in ay ugu galmoodaan, wuxuuna sheegay in gabar kasta oo muuqaal laga duubo oggolaashaheeda la weydiiyo.
“Dumarka muuqaal aysan raalli ka ahayn kama duubno, waxaan leennahay jilayaal” ayuu igu yiri.
“Marka waxaan weydiiyey wax kahald ah maadan sameyn miyaa?. “Haa dabcan” ayuu iigu jawaabay.
“Ma aaminsanid miyaa inaad sharciga meel kaga dhaceysid?” ayaan markale weydiiyey. “Dabcan haa” ayuu markale iigu jawaabay.
Marki aan Richard Hood, la kulmay kaddib waxaa baraha bulshada laga saaray muuqaallada soo jiidashada dumarka ee sida qarsoodiga ah loo duubay.
Waxyar un ka hor inta aan filimkan hawada ka sii deyn YouTube wuxuu tiray in ka badan 100 muuqaal oo waddooyinka laga duubay.
‘Xadgudubyada iyo habdhaqanka xun’
Iminkana aan u soo noqonna Glasgow, eegista dacwadda Cadnaan Axmed waa la soo gabagabeeyey.
Gabadh hadda ay da’deedu tahay 38, xilliga ay da’deedu ahayd 18 jir waxay sheegtay iyada oo mareysa goob laga dukaameysto inuu Axmed uu joojiyey uuna la hadlay.”
“Gacanta ayuu dhabarka iga saaray isaga oo damacsanaa inuu i dhunkado. Gacmihiisa ayaan iska tuuray waxaann=a weydiiyey waxa uu sameynayo. Kaddibna wax wadahadal ah nama dhexmarin oo waan ka tagay.” ayey tiri.
Balse Axmed wuxuu sheegay dumarka marka uu la kulmayo inuu u qaabilo si aan dhibaato lahayn wax dhib ahna uu u geysan, wuxuuna sheegay gabdhaha yaryar oo ay da’doodu tahay 17 jir ama wixi ka yar oo keli ah uu joojiyo uuna la hadlo.
Garsooraha waa uu ku diiday
Axmed waxaa lagu soo oogay shan dacwadood oo la xiriira inuu xadgudub iyo gaboodfal gabadha u geystay wuxuuna hadda ku jiraa xabsi muddo sagaal bilood ah isaga oo xukun sugaya.
« How Siad Barre’s strategy pushed him out of power (By: Jamal Ali Hussein)
DEG-DEG: Guddidii Go’aaminaysay Wakhtiga Kulanka EL-CLASSICO Laga Dhigayo Oo Go’aan Gaadhay – Meel Ku Qoro Taariikhda Ay Shaaciyeen & Garoonka. »
Jubbaland oo sheegtay in Villa Somalia diyaarinayso ciidan iyada lagu burburinayo